Miangavy ny fanjakana foibe hanohana mafy ny fampianarana ireo SE.MPA.MA VAOVAO! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ireo fepetra mihatra manomboka ny 3 mey 2021 il y a 5 jours
« Ny tena apostoly : matoky, mifankatia, tsy matahotra »﻿ il y a 7 jours
Nahazo fitaovana ara-pahasalamana ny distrikan’Analalava il y a 8 jours
IN Groupe et Sipromad peinent à récupérer le marché des visas il y a 10 jours
Misy ihany ireo lafi-tsaran’izao fihibohana izao il y a 10 jours
Mpampianatra tao Fianarantsoa
Miangavy ny fanjakana foibe hanohana mafy ny fampianarana ireo SE.MPA.MA VAOVAO!
Cousin Dox il y a 3 mois
Tafahaona ireo mpampianatra mivondrona ao amin’ny SEMPAMA VAOVAO, tao tsianolondroa ary nanaraotra navoitra ny olana nosedraina tao anatin’ny taona lasa. Misy ny fitakiana nataon'izy ireo araho anie ary fantaro.
Nifampiarahaba tratry ny taona tao amin’ny CCEE Tsianolondroa ireo mpampianatra-mpanabe mivondrona amin’ny sendika vaovao SE.MPA.MA VAOVAO. Mialohan’izany anefa dia nisy ny dinik’asa nanaovana jery todika ny niatrehana ny tontolon’ny fanabeazana sy fampianarana tato Matsiatra Ambony tamin’iny taon-dasa iny. Ankoatr’izay koa ny dinika momba ireo maharary azy ireo eo amin’ny tontolon’ny fanabeazana sy fampianarana. Isan’izany : ny fiangaviana ny fitondram-panjakana hanapariaka ireo fitaovana vaovao anatsarana ny fanabeazana sy fampianarana ho tonga hatrany ambany ravin-kazo any, eo ihany koa ny tokony hanampian’ny fanjakana foibe ny fanampiana ara-bola ireo mpampianatra FRAM (tohanan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra, izy ireo izay nanamafy io fangatahana io mihitsy nandritra izany), ary ny fitsinjovana fisotroan-dronon’ireo mpampianatra be taona vao voaray ho mpiasam-panjakana. «Tsapanay fa efa manao ny ezaka ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena mizara ireo boky sy fitaovana ara-kajimirindra sy mifanaraka amin’ny vanim-potoana ankehitriny, kanefa tsy izy irery noa andrandraina amin’izany » hoy Nomenjanahary Tidson Jean Marcel, filoha nasionalin’ny SE.MPA.MA VAOVAO. Ny fanorenana foto-drafitrasa indray dia tokony ho maro ireo hahazo izany. Ny firenena no mandroso dia manome lanja ambony ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana ka mila mitodika amin’izy ireo ny fanjakana hoy hatrany ny filoha nasionalin’ity sendikà ity. Noho izany dia takian’izy ireo ny fampitoviana sy ny fanitsiana ny mari-karaman’ny mpampianatra hifanaraka amin’ny vaninandro diavina izao. Ilay fampanantenana ny hanafoana ny 0 Ariary moa dia takian’izy ireo ny fampiharana azy fa tsy natao resaka fotsiny.
« Ny fahalalana no ipoiran’ny fanapahana hoy izy ireo ka aoka hampidirina lalindalina kokoa ao anatin’ny fandaharam-pianarana eto Madagasikara ny momba ireo harem-pirenena fa tsy ny vahiny indray no mahalala azy bebe kokoa sy mitrandraka izany. Io manko no mahatonga ny mpianatra malagasy miandry asa fotsiny fa tsy mahalala ny hareny».
Nanitrikitrika ireo mpampianatra FRAM ny mba handraisan’izy ireo ny vola 91 000 Ariary nampanantenaina satria ny fiainana sarotra tanteraka. Aoka ihany koa hoy Maharavo Bariniaina Fabrice, solotenan’ny E.N.F DREN Haute Matsiatra mba ho ireo nahavita 10 taona no ho raisina mpiasam-panjakana amin’ny fandraisana mpampianatra manaraka eo ary ny tokony handraisin’izy ireo ny mari-karama farany ambany ambaran’ny lalàna (salaire de base 200 000 Ariary).
Tonga nanome voninahitra ny lanonana ireo manam-pahefana ara-panjakana sy anivon’ny faripiadidiam-pampianarana ao an-toerana. Ny SEMPAMA VAOVAO dia niforona tamin’ny 22 Jona 2012. Efa maro ny ezaka vita hatrizay nijoroany izay indrindra amin’ny tolo-kevitra fanatsarana ny fanabeazana sy fampianarana, ny fiarovana ny mpampianatra manoloana ireo zo tokony hisitrahany sy ny antsojay nahazo ny sasany teo anatrehan’ny raharaham-pitsarana. Ankehitriny aza dia mbola misy mpampianatra vitsivitsy misedra olana ao Fianarantsoa renivohitra sy any amin’ny CISCO Vohibato.
Matoan-dahatsoratra : Misafotofoto sy mifamahofaho ! - il y a 1 jour
Fanehoan-kevitra : « Mutant sy variant » koa ve ny olombelona ? - il y a 1 jour
Fampianarana ankapobeny : Hiverina an-dakilasy ireo mpianatra hanala fanadinam-panjakana rehetra - il y a 4 jours
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur : Lire et respecter les auteurs : sensibilisation digitale des Happy Women - il y a 12 jours